कविता : ‘बाँचेकै छ’ बिहीबार, कात्तिक ११, २०७८
कविता : ‘चौंसट्ठी वर्ग मिटर’ शनिबार, भदौ ५, २०७८
जीवन लामाको दोस्रो कृति ‘चौसट्ठी वर्गमिटर’ विमोचन सोमबार, साउन २५, २०७८
सकुना श्रेष्ठको तीज कोसेली ‘माईतीको आँगनमा’ (हेर्नुस् भिडियो) आइतबार, साउन २४, २०७८
यी १० कुराले यौन जीवनमा मिल्नसक्छ, चरम आनन्द आइतबार, साउन २४, २०७८
कथा : ‘मनमायाको उज्यालो यात्रा’ मंगलबार, साउन १२, २०७८
जान्नुहोस् यौन जीवनका १० प्रश्नको उत्तर अक्सर यौनका कुरामा हामी उति खुल्दैनौं । मनभित्रका कतिपय जिज्ञासा पनि मनमै दबाएर बस्छौं । जबकि जीवनकै एक अभिन्न पाटो हो, यौन । खासगरी दाम्पत्य सुखमा यौनले विशेष भूमिका खेल्छ । बिहीबार, असार २४, २०७८
स्वस्थ जीवनका लागि यस्तो हुनुपर्छ, खानपानको दैनिक तालिका ! कुनै पनि पोषकतत्व आवश्यक भन्दा बढी वा कम भएको राम्रो मानिंदैन । यो सन्तुलित हुनुपर्छ । त्यसैले कुन खानेकुरामा के पाइन्छ, त्यो कति खाने भन्ने कुरा जान्नैपर्छ । कुन खानेकुरा कति खाने भनेर मात्र पनि पुग्दैन । त्यो कति बेला खाने भन्ने पनि जान्नुपर्छ । दिनमा कति पटक खानेकुरा खाने भन्ने तालिकाले हाम्रो स्वास्थ्यलाई सही ढंगले पोषण आपूर्तिमा सघाउ पुर्याउँछ । यो भनेको भोजन व्यवस्थापन पनि हो । किनभने एकै पटक धेरै खानेकुरा सेवन गर्दा पाचन पक्रियालाई असर गर्छ । त्यसैले समय तालिका अनुसार खानेकुरा खानु राम्रो हो । सोमबार, जेठ ३, २०७८
यसकारण आउँछ नकारात्मक सोच, यसरी बनाउनुस् सकारात्मक सोच ! जब व्यक्तिभित्र नकारात्मक भावको विकास हुन्छ । तब तनाव, निराशा जस्ता धेरै समस्याहरुले जन्म लिन थाल्छन्। यस्तो अवस्थामा, तिनीहरूलाई कसरी जोगाउने र जीवनलाई सकारात्मक बनाउने भन्ने बारेमा सिक्नु आवश्यक छ । मानव जातिले आज नकारात्मक सोच र भावनाहरुलाई सामान्य रुपमा ग्रहण गर्न थालेका छन् । सोमबार, वैशाख ६, २०७८
यसरी अघि बढ्दैछ, स्मार्ट दोलखा बनाउने अभियान चरिकोट – नेपाल टेलिकम दोलखा शाखा, जिल्लालाई स्मार्ट जिल्ला बनाउने सरकारको घोषणालाई पुरा गर्ने तयारीमा जुटेको छ । त्यसका लागि जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तह, शैक्षिक संस्थामा द्रुत गतिको ईन्टरनेट सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने काम धमाधम भैरहेको छ । जिल्लाको ९ स्थानीय तह, ७४ वडा कार्यालय, ५७ स्वास्थ्य संस्था र १ सय ३६ सामुदायिक विद्यालयहरुमा दुु्रतगतिको ईन्टरनेटको सेवा उपलव्ध गराई डिजिटल सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ । शुक्रबार, चैत ६, २०७७
टिकटक तीन मिनेटसम्मको बनाउन मिल्नेगरी नयाँ फिचर ल्याउने तयारी काठमाण्डौं - टिकटकले १ मिनेटको समयलाई बढाएर अब तीन मिनेट लामो भिडिओ बनाउने मिल्नेगरी तयारी गरेको छ । लामो भिडियो बनाउने प्रयोगकर्ताहरुको रुचीलाई मध्येनजर गर्दै टिकटक कम्पनीले परीक्षण थालेको हो । बिहीबार, मंसिर १८, २०७७
समाचार एजेन्सीहरुलाई १ अर्ब डलर दिने गुगलको घोषणा काठमाडौं - इन्टरनेट जाएन्ट गुगलले विश्वका समाचार संस्थाहरुलाई आगामी ३ वर्ष भित्रमा १ अर्ब डलर रकम भुक्तानी गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । शनिबार, असोज १७, २०७७
के दिउँसो सुत्ने गर्नुहुन्छ ? फाईदा बेफाईदाबारे जान्नुहोस् ! कोरोना भय र लकाउनको कारण अधिकांश घरभित्रै खुम्चिए । घरभित्र बस्दा के गर्ने ? कामधन्दाको मेलोमेसो नपाएकाहरुलाई समय कटाउन गाह्रो भयो । भान्साको काम गर्ने कि ? बगैंचामा रमाउने ? बालबच्चासँग खेल्ने ? विकल्प अनेक हुनसक्थ्यो । तर, सधैभरी मुड हुँदैन । यस्तो अवस्थामा समय कटाउने बाहाना बन्छ, बेपर्वाह सुत्ने । बुधबार, असोज १४, २०७७
प्रधानमन्त्रीको कविता : मेरो जून हरायो शनिबार, भदौ १३, २०७७
राजेश हमालले भने - सकारात्मक भएर दीपालाई माफि दिनुहोला ! कामाण्डौं - नायक राजेश हमालले कलाकार दीपाश्री निरौलाले आफ्नाबारे दिएको अभिव्यक्तिबारे मुख खोलेका छन् । उनले निरौलालाई माफि दिन सबैसँग आग्रह गरेका हुन् । गएराती भिडियो हमालले राष्ट्रको सिने क्षेत्रका लागि, कला क्षेत्रका लागि मानवताका लागि अत्यन्तै सकारात्मक भएर सम्बन्धित व्यक्तिलाई माफि दिन भनेका छन् । बुधबार, असार ३१, २०७७
यसकारण मानिसले अरुको चाकडी गर्छ ! हाम्रो समाजमा सबैभन्दा बढी सलबलाउने भनेकै चाकडीबाज हुन् । किनभने हाम्रा ठूलाबडाहरुले नै चाकडी(संस्कारलाई गोडमेल गरिरहेका छन् । शनिबार, असार २०, २०७७
कालिञ्चोक गाउँपालिकामा अनलाईनबाटै व्यक्तिगत घट्ना दर्ता चरिकोट – कालिञ्चोक गाउँपालिकाले अनलाईन प्रणालीबाट व्यक्तिगत घट्ना दर्ता सुरु गरेको छ । सेवाग्राहीको सहजता, अभिलेखको दिगोपना र सुरक्षालाई मध्येनजर गर्दै गाउँपालिकाले व्यक्तिगत घट्ना अनलाईनबाटै दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको हो । यसअघि जन्म, मृत्यु, विबाह, वसाईसराई, सम्बन्धविच्छेदका घट्नाको फाराम भर्न सेवाग्राही कार्यालयमै पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । सर्बसाधरणले अब अनलाईनमा रहेको फाराम भरेपछि प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बिहीबार, जेठ २९, २०७७
कविता : विभेद मुक्तिको कर्नल फूक मंगलबार, जेठ २७, २०७७
नागरिकको उद्धारसँगै जोखिम रोकथाम र नियन्त्रणमा ध्यान देउ यस्तो पृष्ठभूमिमा अब ठोस पुर्वतयारी, प्रतिकार्य योजना निर्माण र सरोकारवाला निकायहरुबीचको समन्वय थप बढेर गएको छ । संक्रमित मुलुकबाट फर्किएकाहरुलाई हामी केही गर्न सक्दैनौं, होम क्वारेन्टाईनमा गएर बस, भनेर पन्छिने छुट स्थानीय सरकारलाई छैन । फर्किएकाहरुमा संक्रमण भए÷नभएको पहिचान गरी आम नागरिकर्लाइ ढुक्क हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । मंगलबार, जेठ २०, २०७७